ရဟန်းမင်းကြီးယောဟန် (၂၃) ၏ဘ၀တစ်စေ့တစ်စောင်း ဘ၀အကျဉ်းချုပ် | Radio Veritas Asia
ရဟန်းမင်းကြီးယောဟန် (၂၃) ၏ဘ၀တစ်စေ့တစ်စောင်း
စိန်ဂျွန် (၂၃) သည်၊ ရဟန်းမင်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ရိုး ရှင်း၍၊ ရိုးသားသောနေထိုင်မူဘ၀သည် သူ၏အမှတ်သင်္ကေတ တစ်ခုနှယ်ဖြစ် ခဲ့ပါသည်။ သူသည် (၂၀) ရာစု၏ရဟန္တာတစ်ပါးလည်းဖြစ်ပြီး၊ သူရှင်သန် ခဲ့သော ရာစုနှစ်ကို၊ အလွန်လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည် မိသား စု၏သားသမီးများအနက်၊ အကြီးဆုံးဖြစ်သကဲ့သို့၊ သားဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူ့အားအီတလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ ဘဲလ်ဂါမိုခရိုင်၊ Sotto il Monte အရပ် တွင်မွေးဖွားသန့် စင်ခဲ့ပါသည်။ သူသည်ဘဲလ်ဂါမိုသာသနာရှိ၊ ဖရန်စစ ္စကန် အခြေခံရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့၀င်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(၁၉၀၄) ခုနှစ်တွင်၊ ရဟန်းသိက္ခာတော်မြတ်ကိုခံယူခဲ့ပြီး၊ ကက်သ လစ်သာသနာ၏ဥပဒေ (ကာနွန်ဥပ ဒေ) ကိုအ ထူးပြုလေ့လာ ရန်၊ ရောမမြို့ သို့ကြွသွားခဲ့ပါသည်။ ပညာသင် ကြာြး ပီးနောက်၊ သာသနာပိုင်ဆရာတော်၏ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်လည်းအမူတော်ထမ်းခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ၊ မိမိတက်ေ ရာက်ခဲ့သော၊ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဍ်၊ သာသနာ၏သမိုင်းဘာသာရပ်ကို လည်းသင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။ သာသနာစာစောင်တစ်ခု၏ တာ၀န်ခံ အဖြစ် လည်း တာ ၀န်ယူခဲ့ပါသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလဍ်၊ လူနာထမ်းစဉ်ထမ်းခဲ့ရသောစစ်မူ ထမ်း ကာလသည်၊ သူ့အားစစ်၏အကျည်း တန်မူကိုလုံးဝြမင်တွေ့ သိရှိခဲ့ရသူ လည်းဖြစ်သည်။
(၁၉၂၁) ခုနှစ်တွင်၊ ဗာတီကန်၏၊ သာသနာတော်ပျံ့ပွားရေး ဌာန ဆိုင်ရာညွှန် ကြားရေးမှူးဖြစ်လာခဲ့ပါ သည်။ ထိုသို့အလုပ်ရှုပ်သော်လည်း၊ သာသနာတော်၏ဖခင်ကြီးများအကြောင်း (Patristics) ပြုစုထားသော၊ ဘာ သာရပ်ကို လည်း၊ ရောမရှိရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းဍ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ (ရောမမြို့ကို Eternal City ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။)
(၁၉၂၅) ခုနှစ်တွင်၊ ဗာတီကန်ရုံးတော်၏၊ သံတမန်အဖြစ်ဘူရ်ဂေး ရီးယား၊ ထို့နောက်တူရဂီနိုင်ငံ၊ နောက် ဆုံးအနေဖြင့်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် (၁၉၄၄-၁၉၅၃) ခုနှစ်အထိ၊ အမူတော်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယက မ္ဘာစစ် ကာ လအတွင်း၊ သြသောဒေါ့သာသနာ၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်၊ ချစ် ခင်ရင်းနှီးခွင့်ရရှိခဲ့ပါသည်။ တူရဂီနိုင်ငံဍ်နိုင်ငံတော်တာ၀န်ကို ထမ်းဆောင်ေ နသော၊ ဂျာမဏီသံတမန်၏အကူအညီဖြင့်၊ (၂၄၀၀၀) ခန့်ရှိမည်ဖြစ်သော၊ ဂျူးလူမျိုးတို့ အားကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် (၁၉၅၃) ခုနှစ်တွင်၊ အီတလီနိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေး မူမြို့တော်ဖြစ်သော ၊ ဗင်းနစ်မြို့၏ရဟန်းအ မတ်အဖြစ်ကြေငြားခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ သက်တော် (ရ၈) ၀င်ရောက်ပြီးများမကြာမီ၊ ရဟန်းမင်းကြီးအဖြစ်၊ တရား၀င် ထုတ်ပြန်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ မိမိ၏ဆေးကြောခြင်းနာမည်အန်းဂျေလိုမှ၊ ဂျွန် အဖြစ်ပြောင်းလဲခံယူလိုက်ခြင်းမှာ၊ ဖခင်ဖြစ် သူ၏အမည် လည်းဖြစ်ပြီး၊ ရော မမြို့ရှိဘုရားကျောင်းကြီးနှစ်ဆောင်အားမှိုင်းမသော၊ ရဟန္တာနှစ်ပါးဖြစ်သော၊ စိန်ဂျွန် လေတလန် (St.John Lateran) ၏အမည်နာမကို လည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သူသည်အ လွန်အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးနှင့်၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမူများကြောင့်၊ များ မကြာမီလူသိများလာခဲ့ပါသည်။ (၁၉၆၂) နှစ်တွင်၊ ကျူးဘားနိုင်ငံ၏မီဆိုင်းလက်နက်ကြီးများ၊ ရပ်ဆိုင်းရေးကိစ္စကိုရှေ့ တမ်းမှရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
သူ့လက်ထက်ဍ်၊ ထုတ်ဝြေဖန့်ချီနိုင်ခဲ့သော၊ လူသိများသောစာ ချွန်တော်များမှာ၊
၁. Mother and Teacher (1961)
၂. Peace on Earth (1963) တို့ဖြစ်ပါသည်။
သူရဟန်းမင်းကြီးဖြစ်လာသောအခါ၊ ရဟန်းအမတ်ဦးရေကို ထပ် တိုးခဲ့ ပြီး၊ နိုင်ငံတကာရဟန်း အမတ် များကိုလည်း၊ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဗာတီကန် (၂) သံဃာယနာတင်အစည်းအဝေးကြီးနှင့်သူ၏ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ
ဗာတီကန် (၂) အစည်းအဝေးကြီးကိုလည်း၊ အတိုက်အခိုက်များ ကြားမှ၊ ဖြစ်မြောက် အောင်လုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအ စည်းအဝေး အစဍ် ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာသည်၊ မှားယွင်းမူနှင့်၊ ပျက်စီးခြင်းကို သာစိတ်၀င် စားနေသော၊ ပျက်စီးခြင်း၏ပရောဖက်ကိုသာတွေ့မြင်ရကြောင်း၊ ဝေဖန်မိန့် ကြားခဲ့ပါသည်။ သာသနာ တော်အနေ ဖြင့်၊ အမှားများကိုအ ဆင်ဆန့်ကျင်ပါ သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်မူ၊ ခရစ်တော်၏ကြင် ဖက်ဖြစ်သော အသင်း တော် သည်၊ ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းသည်ထက်၊ သနားခြင်းဆေး မီးတိုကိုအ သုံးပြုရန် ပို၍၊ နှစ်လိုပါ ကြောင်း၊ အစည်းအ ဝေးကြီး ၏အစဍ်မိန့်မြွတ်ခဲ့ပါသည်။
သူ၏နောက်ဆုံးထွက်သက်အချိန်ထိ၊ ဧဝံဂေလိကျမ်း စာကို၊
ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းမဟုတ်၊ ၄င်းကိုပိုမိုနား လည်ရန်အ စပြုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်အသက်ရှင်ခဲ့ရသလောက်၊ ရှင်သန်ခွင့်ရ ခဲ့သောသူ များအနေ ဖြင့်၊ ယဉ်ကျေးမူနှင့်၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတို့ ကွဲပြားခြားနားချက် များ က်ိုယှဉ်တွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ လက်ရှိအ နေအထား အရ၊ ခေတ် ၏တောင်းဆိုမူကိုသိနိုင်ပေမည်။ သို့မှသာအခွင့်အရေး ကိုလက်ဆုပ် လက် ကိုင်ထားနိုင်ပြီး၊ ရေ ရှည်ကိုလည်းမျှော်တွေးလုပ်ကိုင်နိုင်ပေမည်ဟု၊ ဒုတိ ယဗာတီကန်အစည်းအဝေးကြီးနှင့်ပတ်သက်၍မိန့်ခဲ့ပါသည်။ အ စည်းအဝေး ကြီးနှင့်ပတ်သက်၍၊ အသံဗလံများစွာထွက်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း၊ ယနေ့စိန် ပီတာဘုရားကျောင်းတော်ကြီး ဍ်၊ တိတ်ဆိတ်စွာလဲလျှောင်းနေသော၊ သူ၏ရုပ် ကလပ်ကိုလာရောက်ဖူးသူများအနေဖြင့်၊ သူ့အားကျေးဇူးတင်မိကြသ ကဲ့သို့၊ သူ၏သန့်ရှင်ခြင်းဖြင့်ဦးဆောင်ခဲ့သောဦးဆောင်မူကိုလည်း၊ ပြန်လည်အမှတ်ရနေကြပေမည်။
သူသည် ဇူလ (၃၊ ၁၉၆၃) ခုနှစ်တွင်ပျံလွန်သွားခဲ့ပါသည်။ သူသည်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် (၂) မှ Blessed (မင်္ဂလာရှိသောသူ) အဖြစ် (၂၀၀၀) ခုနှစ်တင်မြောက်ခဲ့ပြီး၊ (၂၀၁၄) ခုနှစ်တွင်၊ ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်မှ၊ ရဟန္တာအဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ သူသည်စံထားလောက်သော ပုဂိုလ်ဖြစ် ပါသည်။ သူသည်သင်းကွဲ ခရစ်ယာန်ညီ အစ်ကိုများ နှင့်လည်းကောင်း၊
အော်သောဒေါ့ ခရစ်ယာန်များနှင့်လည်းကောင်း၊ ဂျူးများနှင့်လည်းကောင်း၊ မွတ်စလင် များနှင့်လည်းကောင်း၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ရန်အားပေးတိုက် တွန်းခဲ့ သူဖြစ်ပါသည်။